I-PVP Polymers 1 abavelisi kunye nababoneleli - iTshayina yePVP Polymer 1 mveliso
IPVP Polymers 1
I-PVP K yipolymer ehlanganisiweyo, ebonelelwa ngomgubo omhlophe okanye ococekileyo omhlophe, obaleka usuka ezantsi uye kwi-viscosity ephezulu kunye nezantsi ukuya kubunzima obuphezulu beemolekyuli ngokunyibilika kwizinyibilikisi ezinamandla kunye nezinto eziphilayo, nganye enophawu lwe-K Value. izinto eziphilayo.
I-VP / VA Copolymers zivelisa iifilimu ezivulekileyo, eziguqukayo, zeoksijini ezihambelana neglasi, iiplastiki kunye nesinyithi. I-resin yeVinylpyrrolidone / iVinyl acetate (VP / VA) ilayini, ii-copolymers ezingahleliwe ziveliswa yipolymerization yasimahla ye-monomers kwi-diferrent ratios. I-VP / VA copolymers isetyenziswa ngokubanzi njengabenzi beefilimu ngenxa yokuba bhetyebhetye kwefilimu, ukunamathela okuhle, ubumnandi, ukususwa kwamanzi kunye nobulukhuni. Ezi propati zenza i-PVP / VA copolymers ezifanelekileyo kwiintlobo ezahlukeneyo zeshishini, ukhathalelo lomntu kunye neemveliso zamayeza.
I-VP / DMAEMA Copolymer (VP / Dimethylaminoethylmethacrylate Copolymer) isisombululo esimalunga ne-20% kwaye inokwenziwa nge-carbomer kwiijel ezicacileyo. Inika ugcino oluphezulu lokugcina i-curl yokufuma, ukubamba okuphantsi kunye nokuthamba okuncinci ezinweleni. Ngapha koko, inceda ukumanzisa okumanzi kunye nokomileyo kwaye inike ukuhambisa, ukuqaqamba, umzimba kunye nokuziva kwesilky ezinweleni. Inika ulusu olugudileyo nolulungeleyo kulusu kwaye kwaye lwenze i-polyelectrolyte matrix enokutshiza xa isetyenziswa ngokudibeneyo ne-rheology modifiers.CP ...